घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू एब्रेची ईज बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो लेखले तपाईंलाई एब्रेची इज बचपन कहानी, जीवनी तथ्या .्क, पारिवारिक जीवन, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन, जीवनशैली, प्रेमिका, व्यक्तिगत जीवन र अन्य उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण कभरेज प्रदान गर्दछ जब उनी बच्चा थिए जबदेखि उनी राम्रो चिनिए।
Eberechi Eze को जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको गतिशील शैलीको खेल र प्राविधिक क्षमताहरूको बारे। यद्यपि केवल थोरैले हाम्रो Eberechi Eze को बायो संस्करणको विचार गर्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
एब्रेची ईजेको बाल्यकाल कहानी:
एबेरेची ओलुची ईजेको जन्म जून १ 29 1998 of को २ day तारिख ई England्गल्याण्डको दक्षिण पूर्व लन्डनको ग्रीनविच क्षेत्रमा भएको थियो। उहाँ आमाबुबामा जन्मेका one भन्दा कम बच्चाहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ जसलाई धेरै उनको जीवनी राख्ने समयको बारेमा थाहा छैन।
आफ्नो जन्मस्थल र रueको आधारमा, ईजे पूर्वी-नाइजेरिया जाति र वंशका ए an्ग्लो-अफ्रिकी हो। जस्तै क्रिस सानो, उस्को दुबै परिवार एकै लन्डन क्षेत्रमा। इजा एब्रेची दुई भाई चिमा र इकेचीका साथ उही ठाउँमा हुर्केका थिए - जो कि उहाँभन्दा ठूला वा कान्छिन हुन सक्थे।
युवा Eberechi Eze लन्डन राजधानी मा हुर्केका थिए। क्रेडिट: IG र WorldAtlas।
इ England्ल्याण्डको राजधानीको पुरानो ग्रीनविच अस्पताल नजिकैको एउटा फ्ल्याटमा हुर्किएकी युवा इजे एक युवा एथलेटिक बच्चा थिइन जसले मनोरञ्जन र भाग्नको कारणले बचपनको खेलको रूपमा फुटबल खेल्थ्यो।
भाग्नको लागि सुरु गर्न, एबेरेची इजेको परिवार बसोबास गर्ने क्षेत्र र उहाँ हुर्केका ठाउँमा राम्रो स्थान थिएन - अपराध तत्वहरूको लागि धन्यवाद थिएन। यो एक ठाउँ मात्र हो जुन तिनका आप्रवासी नाइजेरियन आमाबाबुले आफ्नो जन्म हुनुभन्दा धेरै बर्ष पहिले इ England्ल्याण्डमा बसाई सरेपछि बाँच्न सक्थे। नाइजेरियाको पारिवारिक उत्पत्तिबाट आएका यस्तै बसाईहरू जस्तै, इजेका अभिभावक तल्लो-मध्यम-वर्गका थिए।
यस बायोलाई राख्ने समयमा एबेरेची इजेका आमा बुबाआमाको बारेमा धेरै थाहा छैन। छवि क्रेडिट: ClipArtStudio
त्यस्तै, इजेसँग उसको वरिपरिको उमेरका धेरै बच्चाहरू थिएनन्। जे होस्, उसले खुशीसाथ कुनै अवसरमा उनीहरूसँग धार्मिक फुटबल खेल्दै बच्चाहरूसँग साझा आधारहरू फेला पारे।
Eberechi Eze शैक्षिक र क्यारियर निर्माण:
पहिलो स्थान जुन त्यसबेलाको फुटबल उडन्ता र उनका साथीहरूले प्रायः स्कूल पछि पर्थ्यो जहाँ नजिकैको पिच थियो जहाँ उनीहरू लामो समयसम्म फुटबल खेल्ने उनीहरूका अभिभावकहरूले उनीहरूलाई बोलाउँदैनन्।
त्यसबेलाको फुटबल खेलाडीले प्रायः स्कूलको पछि उसका साथीहरूसँग फुटबल खेल्थ्यो। क्रेडिट: Pinterest।
इज यसमा हुँदा, उसलाई थाहा थियो कि उनी आफ्नो लागि नाम कमाउन सक्ने खेलमा बहुमूल्य कला सिक्दै थिए। उनी कुनै पनि प्रतिष्ठित फुटबल एकेडेमीमा बिकास क्यारियर निर्माण शुरू गर्ने सम्भावनाहरूप्रति सतर्क थिए।
फुटबलमा इबेरेची इजेको शुरुआती वर्षहरू:
जब समय सहि थियो, इजेले आर्सेनलको युवा प्रणालीको साथ प्रशिक्षण सुरु गरे तर २०११ मा रिहा गरियो किनभने लन्डनमा आधारित क्लबले त्यतिबेला सानो १ 2011 बर्षको उमेरलाई उज्ज्वल सम्भावितको रूपमा देखेन। आर्सेनलले उहाँलाई अस्वीकार गर्दा उनीहरूले स्वीकारे एडी नाइकेयाहिया, चेल्सीका अर्को रिसर्की जो उनीहरुलाई राम्रो लाग्यो।
अस्वीकृति दुख्छ, तर यो उसलाई पछाडि राख्नु पर्दैन। अपेक्षित रूपमा, एबेरेची इजेका अभिभावक र परिवारका सदस्यहरूले इजलाई यस अवधिमा मानसिक रूपमा बलियो रहन मद्दत गर्न यथाशक्य गरे।
जे भए पनि फिर्ताले इजलाई केही समयको लागि उदास बनायो, ऊ आफैंलाई लिन र फुल्हम एकेडेमीमा सुरक्षित गर्न सक्षम भयो जहाँ उसले फेरि फुटबलको आनन्द लिन शुरू गर्यो। त्यसपछिको शुरुआती क्यारियरका प्रयासहरूले इजलाई पढ्ने एफसीमा-महिनाको कार्यकाल प्राप्त भैरहेको देख्यो उनले २०१4मा १w बर्ष उमेरका रूपमा मिलवाल एफसीमा प्रवेश गरे।
उनको एक दुर्लभ फोटो मिलवाल FC छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्रामको लागि खेल्दै।
Eberechi Eze को जीवनी - प्रख्यात कथा को मार्ग:
के तपाईंलाई थाहा छ कि इजे मिलवाल एफसीबाट रिलीज भयो जब उसले सोच्दछ कि क्लबको साथ उसको भविष्य आशावादी दिशामा गइरहेको छ? फेरी, यो दुखी विकास दुबै आश्चर्यजनक र निराशजनक थियो। कुनै पनि युवा फुटबलर जो एक जारी मात्र एक पटक तर दुई पटक जारी को माध्यम बाट बाँचिरहेको छ मात्र थाहा पाउँदछ यो पनि गहिरो भावनात्मक पीडा हुन सक्छ।
मिलवालले आफ्नो आश्चर्यजनक विज्ञप्ति पछि, इजेले दुखी भएर आफ्ना आमाबाबु र परिवारका सदस्यहरूलाई उनले फुटबल छोड्न भने। उनले टेस्कोमा आंशिक जागिर खाने र कलेजमा पढाइ जारी राख्ने विचार गरे तर उनलाई चाँडै नै क्वीन्स पार्क रेंजर्स (क्यूपीआर) मा भर्ना हुनको लागि फोन आयो।
आफू, बुबाआमा र परिवारका सदस्यहरूको खुशीको लागि क्यूपीआर उसको समस्याग्रस्त वास्तविकताको लागि सान्त्वनाको स्रोत बन्न पुग्यो। १ 18 बर्षे इजले अगस्त २०१ 2016 मा क्लबसँग पहिलो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर फेरि खेल्ने अवसरलाई स्वीकार गर्‍यो। उनीहरूको तर्फबाट, क्यूपीआरले इजलाई आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने र skillsणमा उनलाई वाइकम्बे वान्डरर्स पठाउने सहितको सीप विकास गर्ने अवसर दिए। २०१ in मा।
Eberechi Eze को जीवनी - प्रख्यात कथा उठ्नुहोस्:
आफ्नो एक बर्षको प्रभावकारी loanण कार्य समाप्त भएपछि, इजेलाई उसको अभिभावक क्लबमा ल्याइयो जहाँ उनले एक विger्गरको रूपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्। २०२० सम्म अगाडि बढि इज वि the्गर हो जसलाई क्यूपीआरको म्यानेजरले आफ्नो टीम निर्माण गरेका छन।
विger्गर क्युपीआरमा खुसी छ जहाँ ऊ टीमको लागि मूल्यवान छ। छवि: ESPN
नाइजेरियाको पारिवारिक उत्पत्तिको फुटबलर पनि यसका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अनुमान गरिएको थिएन महान पुरुष फुटबल खेलाडी। जे होस्, ऊ फुटबलको लागि इ England्ल्यान्डको सब भन्दा सुन्दर प्रतिज्ञाहरू मध्ये एक बन्ने लाइनको भ्रमण गर्दैछ।
यसअगाडि युरोपको शीर्ष टोलीहरूको रडारमा छ जबकि इ England्ल्यान्ड र नाइजेरियाले पनि आफ्नो हस्ताक्षरलाई अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्यका लागि सुरक्षित राख्न कदम चालेको छ। नाइजेरिया अधिक आशावादी छ कि केटाले सुपर ईगल्सको लागि खेल्दछ। यसमा इ England्ल्यान्डका स्वदेशी खेलाडीहरू सोन Aluko जस्ता मार्ग पछ्याउनु समावेश छ, विक्टर मोशा, शोला अमेओबी, Alex Iwobi र ओला आइना।
इबेरेची इजको प्रेमिका- उनी अविवाहित वा विवाहित हो?
इज एब्रेची प्रेम जीवनमा अघि बढ्दै, हामी निर्धक्क भएर भन्न सक्दैनौं कि उहाँ एकल हुनुहुन्छ। यो धेरै जसो वि's्गरको इन्स्टाग्राम पृष्ठमा दुई फोटोले उहाँसँग एक सानो ज्ञात प्रेमिका छ भन्ने सुझाव दिन्छ।
इजे एबेरेकी प्रेमिका केवल अफ्रिकी जरामा नभएको जस्तो देखिन्छ तर प्रभावशाली वि the्गरको लागि एक उत्तम खेलको रूपमा फ्यानहरूलाई प्रहार गर्दछ। हामी वास्तवमै आशा गर्दछौं कि दुबै डेटि are गर्दै छन् र भविष्यका लागि ठूला योजनाहरू छन्।
उनको सानो ज्ञात प्रेमिकाको साथ एबेरेची इजेको प्यारा फोटोहरू। स्रोत: इन्स्टाग्राम।
Eberechi Eze पारिवारिक जीवन:
पारिवारिक फुटबलमा ईजेको उसको प्रारम्भिक जीवनदेखि मिति सम्मको यात्राको मुख्य आधार हो। यस सेक्सनमा, हामी एबेरेची इजेका आमा बुबा र परिवारका सदस्यहरूमा बढी प्रकाश दिन्छौं।
Eberechi Eze बुबा र आमाको बारेमा:
इजेले अझै आफ्नो नाइजेरियाका अभिभावकहरूको पहिचान प्रकट गर्न सकेको छैन तर हामी निश्चित रूपमा जान्दछौं कि तिनीहरू फुटबल उत्साही र सहयोगी आमाबाबु हुन्। वास्तवमा, विन्जरले आफ्नो आमालाई आर्सनल एकेडेमीबाट असह्य हटाए पछि उसलाई सान्त्वना दिनको लागि श्रेय दिए।
अर्कोतर्फ, नाइजेरियाको फुटबल महासंघ - २०१ 2019 को अन्तमा - उनीहरूले इजेको बुवा र आमासँग छलफल गरेर उनीहरूको हस्ताक्षर जानीजानी गरेको कर्तव्यका लागि छलफल गरिरहेका छन्। छलफलहरूले ईजेका अभिभावकको आफ्नो क्यारियर जीवनमा संलग्नताको बारेमा धेरै कुरा गर्छ।
एबेरेची इजेका भाई बहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
विger्गरलाई दुई भाई बहिनीहरू भनेर चिनिन्छ। तिनीहरू उनका दाज्यूहरू हुन् Ikechi र चिमा। इकेची एक फुटबलर हो जसले ब्रेन्ट्री टाउन फुटबल क्लबको लागि खेल्छ (अप्रिल २०२० मा)। उसको पक्षमा, चिमा धेरै Eze जस्तो देखिन्छ। उसको फेसन र अनलाइन शपिंगमा रुचि छ।
Eberechi Eze आफ्ना भाइहरू Ikechi (बायाँ) र चिमा (दाँया) संग। स्रोत: इन्स्टाग्राम।
ईजेको नजिकको पारिवारिक जीवनबाट धेरै टाढा, तिनका पुर्खा र परिवारको उत्पत्तिको बारेमा खासै ज्ञात छैन किनकि उनीहरू उहाँकै बुवा र हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै, ईजेका काकी, काका र काकाको कुनै रेकर्ड छैन जबकि उनका भतिजा र भतिजा अझै अज्ञात छन।
Eberechi Eze व्यक्तिगत जीवन:
उसको अन-पिच क्यारेक्टरबाट टाढा, एब्रेची इजेले मनमोहक व्यक्तित्वका लक्षणहरू समावेश गर्दछ जसमा लचिलोपन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता र हास्यको अनौंठो भावना समावेश छ। थप रूपमा, उनी जान्दछन् कसरी सही मनोवृत्तिको साथ महत्वाकांक्षालाई सन्तुलित गर्ने।
अद्भुत विger्गर जसको राशिफल साइन कर्क हो विरलै शायद आफ्नो निजी र व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धित विवरण प्रकट गर्दछ। गतिविधिहरू जसले उसको रूचि र शौकलाई बनाउँदछन् चलचित्रहरू हेर्न, संगीत सुन्न, भिडियो गेमहरू खेल्न र परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउन।
केहि फुटबल जीन्युइज मध्ये एक हेर्नुहोस् जुन तिनीहरूको आँखा बन्द नगरीकन संगीतको आनन्द लिन्छ। स्रोत: इन्स्टाग्राम।
Eberechi Eze को जीवन शैली:
इजे एबेरेचीले कसरी आफ्नो पैसा कमाउँछ र कसरी खर्च गर्छ भन्ने सम्बन्धमा, यस बायो लेख्ने क्रममा उनीसँग अनुमानित १ मिलियन डलर भन्दा बढीको सम्पत्ति छ। विger्गरको नेट वर्थमा स्ट्रिमहरू योगदान पुर्‍याउनेमा उसले पहिलो टीम टोली फुटबलको लागि खेल्ने वेतन र ज्याला शामिल गर्दछ।
यो बायो लेख्ने उनीको मूल्य million 1 मिलियन (२०२० आंकडा) छ। छवि: इन्स्टाग्राम र फोटोफुनिया।
थप रूपमा, एडिडास जस्ता ब्रान्डको समर्थनले ईजेको सम्पत्ती आधारलाई बढावा दिन धेरै गर्छ। यस्तै, ऊ जीवनको रमाइलोको लागि विदेशी होइन जसमा विदेशी कारहरू सहित लन्डनको सडकहरू यात्रा गर्ने साथै सभ्य घरमा बस्नु समावेश छ।
Eberechi Eze तथ्यहरु:
हाम्रो Eberechi Eze को बायो को अन्त्य गर्न, यहाँ Winger को बारे मा थोरै ज्ञात वा अनटल्ड तथ्यहरू छन्।
तथ्य # १ - तलब ब्रेकडाउन:
3 अगस्त २०१ 2016 मा, अग्रेषितले क्यूपीआरसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो, जसले उनलाई प्रति वर्ष २273,000,००० डलर (313,051१XNUMX,० Eur१ युरो) को ठूलो तलब कमाइरहेको देखे। उसको तलब साना संख्यामा क्रunch्चing्ग गर्नु भनेको यसको मतलब हो कि उसले निम्न कमाउँछ।
प्रति वर्ष: £ 273,000 € 313,051
प्रति महिना: £ 22,750 € 26,088
प्रति हप्ता: £ 5,291 € 6,067
प्रति दिन: £ 756 € 867
प्रति घण्टा: £ 32 € 36
प्रति मिनेट: £ 0.53 € 0.6
प्रति सेकेन्ड: £ 0.008 € 0.01
Eberechi Eze वेतन ब्रेकडाउन
यो के हो EBERECHI EZE कमाई गरिएको छ किनकि तपाईं यो पृष्ठ हेर्न शुरू गर्नुभयो।
यदि तपाइँ माथि के देख्नुहुन्छ पढ्छ (०), यसको मतलव तपाई एएमपी पृष्ठ हेर्दै हुनुहुन्छ. NON-AMP पृष्ठहरुमा प्रति दोस्रो कमाई उसको तलब वृद्धि देख्न सकिन्छ.
तपाईंलाई थाँहा थियो?… औसत ब्रिटेनका नागरिकले कमाउँछन् £ 2,830 प्रति महिना कमाउन months महिना को लागी काम गर्नु पर्छ £ 22,750 जुन इजेले एक महिनामा आर्जन गर्छ।
इजेसँग कुल IF points अ of्कको फिफा रेटिंग छ। खराब रेटिंग वृद्धि र राम्रो फारमको प्रकाशमा अस्थायी हो जुन वि the्गरले हालसालै प्रदर्शन गरिरहेको छ। यसप्रकार, प्रशंसकहरूले इजले 75 83 अ of्कको उनको सम्भाव्यता देख्नुभन्दा पहिले यो कुरा मात्र हो।
कुनै श doubt्का बिना, एबेरेची इजेको सोफिफा रेटिंग्स (फिफा २० आंकडा) ले उनी उल्लेखनीयका साथै - मनपर्दो पनि देखाउँदछ शमूएल चुकुउज, बोबकारी सोमारे र कर्टिस जोन्स भविष्यका लागि खेलाडीहरू हुन्।
यो उपयुक्त छ कि यो उहाँको नम्र शुरुआत हो। छवि: SoFIFA।
विger्गरले अझै विश्वासी छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा पोइन्टहरू छाड्छ। यद्यपि, असमानताहरू एबेरेची इजेका आमाबाबुको पक्षमा छन् र उनलाई इसाई धर्मको अभ्यास गर्ने विश्वासीको रूपमा हुर्काएको छ। यो धर्म दक्षिणपूर्व नाइजेरियाको इग्बो निकासीको साथ धेरै हदसम्म अनौठो छ जहाँ ईजेको परिवारको जरा छ।
धेरै फुटबल प्रतिभाहरु जस्तै, Eze घरपालुवा जनावरहरु लाई विशेष गरी कुकुरहरु मा ठूलो छ। उनीसँग एउटा दुर्लभ नस्ल कुकुर छ जुन उनले प्रशंसकहरूको प्रशंसा गर्न अक्सर इन्स्टाग्राम योग्य तस्बिरहरू लिन्छन्। तल यस्तै प्यारा फोटोहरू मध्ये एक हेर्नुहोस्।
कृपया खेलाडी वा उसको अभिभावक क्लबलाई सम्पर्क गर्नुहोस् जब तपाईं एक लडाइँमा यस्तो देखिन्छ कि एक आवारा कुकुर देख्नुहुनेछ। IG
तथ्य # 4- ट्याटूहरू:
इजे ट्याटू वा बडी आर्ट बिना नै छ - यस समयमा - किनकि उसले तिनीहरूलाई अनावश्यक थपको रूपमा देख्यो। ऊ बरु राम्रो शरीर निर्माणको दिशामा काम गर्दैछ जुन उसको प्रभावशाली उचाइ feet फिट inches इन्चको अनुरूप छ।
तथ्य # v ट्रिभिया:
के तपाईंलाई थाहा छ ईजेको जन्म वर्ष - १ 1998 1998 the जुन गुगलको स्थापना भएको सर्च ईन्जिनको रूपमा प्रख्यात छ? मनोरञ्जन दृश्यमा, १ XNUMX XNUMX मा लोकप्रिय फिल्महरू टायटानिक र सेभिंग प्राइवेट रायनको रिलीज गर्न देखियो।
केही सुरूवातहरू र रिलिजहरू जसले १ 1998 XNUMX an लाई चाखलाग्दो वर्ष बनाए। गुगल र आईएमडीबी।
हाम्रो बायोग्राफी तथ्या rap्कहरू अप गर्न, हामी तपाईंलाई इबेरेची इजेको विकी प्रस्तुत गर्दछौं। यस तालिकाले तपाईंलाई फूटबलरको बारेमा छिटो र संक्षिप्त जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
पुरा नाम: इबेरेची ओलुची इजे।
जन्म मिति: २ June जून १ 29 1998 age (उमेर २१)
जन्मस्थान: ग्रीनविच, इ England्ल्यान्ड।
अभिभावक: श्री र श्रीमती इजे।
Siblings: Ikechi र चिमा (भाइहरु)।
परिवार मूल / जरा: नाइजेरियाको पुर्ख्यौली।
फुटबल शिक्षा: मिलवाल।
उचाइ: F फिट २ मा (१.5 मीटर)
फिफा सम्भावित: (83 (फिफा २०)
इज एब्रेचीको विकी डाटा
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: Eberechi Eze को हाम्रो संस्करण पढ्न समय निकाल्नु भएकोमा धन्यवाद बाल्यकाल कहानी समावेश सहित जीवनी तथ्यहरु। LifeBogger मा, हामी निरन्तर सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईं केहि देख्नुहुन्छ जुन यो लेखमा ठीक देखिँदैन भने, कृपया तपाईंको टिप्पणी दिनुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।